Apartment Rent in Sanchaung (ID-230/2) အား စမ်းချောင်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Apartment Rent in Sanchaung (ID-230/2)
Apartment rent in Sanchaung Township. 1250 sqft apartment, has Living-room, One Master Bed-room, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-room. Fully furnished.
Asking Price - 10 Lakhs (Nego)
စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသော ငှားရန်တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအကျယ် - ၁၂၅၀ စတုရန်းပေရှိပါသည်။ တိုက်ခန်းအတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် သုံးလုံးအသင့်တပ်ဆင်ပါရှိပြီး ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
တိုက်ခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ၁၀သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
စမ်းချောင်းရှိ ငှားရန်တိုက်ခန်း (ID-230/2)
အမည်: Apartment Rent in Sanchaung (ID-230/2)